Terminus: Kuvhara Zvimwe Zvibvumirano neHolistic Multi-Channel Account-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) Nzira
Iyo inonyanya kushanda, yakangwara, uye inoshanda yekushambadzira zano ndeye account-based marketing (ABM). Inokwidziridzwa nedata-inotungamirwa yakanangana uye yakasarudzika nzira dzakawanda dzekushambadzira nzira, ABM inobatsira vatengesi kuwedzera shanduko uye kukura mari. Terminus ABM Platform Chii chinoisa Terminus kubva kune mamwe mapuratifomu eABM inzira iyo puratifomu inobatisisa maakaundi anotangwa, zvichiita kuti vatengesi vagadzire imwe pombi. Terminus inopa zvechokwadi nzira yakazara kuABM nekuti yemuno, yakawanda-chanera kubatikana kunofambisa mibairo yakawanda. Terminus inobatsira kugadzirisa matambudziko makuru evashambadzi
Gwaro Rakareruka rekukwezva Yako Yekutanga Dhijitari Inotungamira
Chishanu, June 3, 2022 Chishanu, June 3, 2022 Aleksandra Korczynska
Kushambadzira zvemukati, otomatiki email macampaign, uye inobhadharwa kushambadzira-kune nzira dzakawanda dzekusimudzira kutengesa nebhizinesi repamhepo. Nekudaro, mubvunzo chaiwo ndewekutanga chaiko kwekushandisa kushambadzira kwedhijitari. Ndechipi chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kugadzira vatengi vanobatanidzwa (vanotungamira) online? Muchinyorwa chino, iwe uchadzidza kuti chii chaizvo chinotungamira, iwe unogona kukurumidza kugadzira inotungamira online, uye nei organic lead chizvarwa ichitonga pamusoro anobhadharwa kushambadzira. Chii